दाँत रोगीले के गर्ने ? के नगर्ने ? - बडिमालिका खबर
दाँत रोगीले के गर्ने ? के नगर्ने ?
दाँतमा कीरा लागेर प्वाल बढ्दै नशासम्म पुगेपछि दाँत दुखेको हामी अनुभव गर्दछौँ । जसको कारणले गिँजा समेत दुख्ने र सुन्निने हुन्छ । दाँत र गिजा दुख्यो भने रोगीहरु रुने, कराउने र छटपटाउने गर्दछन् । दाँत दुख्दा विशेषगरी गाला सुन्निने, कानवरिपरि र टाउकोको पूरै भागसमेत दुख्छ र ज्वरोसमेत आउँछ ।
खान र गर्न नहुने कुराहरु :
चिसो आइसक्रिम, दही, चिसो फलफूल, चिसो पानी, गुलिया खानेकुराहरु, मिश्री, चिनी, मिठाइहरु खानु हुँदैन । दाँतले चपाउने कडा खानेकुराहरु सुख्खा फलफूलहरुमा : मूला, फर्सी, तामा, आलु, पिँडालु, अमिलो, पीरो आदि खानुहुँदैन ।
दाँत दुखेको बेला चपाउनु नपर्ने तरल खानेकुराहरुमा जस्तै : पातलो जाउलो वा सादा सुप मात्र खाने, दिनको ४/५ पटक तातो पानी पिउने, नून पानीले मुख पटक पटक कुल्ला गरिराख्ने, दुखाइका कारण बढी गाला सुन्निएको छ भने बरफले सेक्ने गर्नुपर्छ ।
दाँत दुखेको बेला नून, ल्वाङ र तोरीको तेल मिसाई दाँत माझ्ने, दाँत बढी दुखेमा सानो टुक्रा कपासलाई रक्सीमा भिजाई दुखेको दाँतले च्याप्ने । बीचबीचमा फिटकिरी र नूनपानी पकाई कुल्ला गर्दा पनि दाँतको दुखाइ कम हुन्छ ।